Qaboojiyaha Hawada Cadceedda DC
Workshop Mashaariicda Qaboojiyaha Hawada
Mashruucyada Qaboojiyaha Hawada Bakhaarka
Mashruucyada qaboojiyaha hawada makhaayadda
Mashaariicda qaboojiyaha teendhada
Mashaariicda Qaboojiyaha Hawada Beeraha
Mashaariicda qaboojiyaha hawada ee aqalka cagaaran
Mashaariicda Qaboojiyaha Jikada
Mashruuca Qaboojiyaha Meesha Dadweynaha
Habka rakibida qaboojiyaha hawada warshadaha iyo sawirka saamaynta
Nidaamka qaboojiyaha uumiga hawada ee warshaduhu wuxuu xallin karaa hawo-qaadista, qaboojinta, ogsijiinta, ka-saarista boodhka, ka-saarista ur, waxayna yareyn kartaa waxyeelada sunta iyo gaasaska waxyeellada leh ee jirka bini'aadamka hal mar warshadaha. Faa'iidooyin badan oo qaboojiyaha hawadu keeno, sida loo rakibo mashiinka qaboojiyaha? Xiritaanka ka dib...
Sida loo qaboojiyo aqoon-is-weydaarsi kulul oo qiimo jaban leh
Waxaa jira warshado badan oo wax soo saar leh oo weydii xalka dhirta qabow xagaaga kulul . Sidaan ognahay aqoon-is-weydaarsiga badankiisu waxay leeyihiin kuleyliyaha mashiinka iyo saqafka birta, markaa ka dhig meel bannaan oo gudaha ah gaar ahaan mid aad u kulul xagaaga. Nidaam qabow oo wax ku ool ah iyo kharash yar waa in dhammaan la tixgeliyo. Markaa warshadaha uumi-baxa ai...
Saamaynta heer-kulka sare iyo aqoon-is-weydaarsiga sultry-ga ee ganacsiga
Deegaanka shaqo ee kuleyl iyo aan wanaagsaneyn ee ka dhacay aqoon isweydaarsiga ayaa sababay jawi shaqo oo aad u liidata, hoos u dhac weyn ayaa ku yimid habsami u socodka shaqada, waxaana la fulin waayay amarada macaamiisha sida xaqiiqada ah, waxaana taasi keentay in ay yaraadaan dalabaadka macaamiisha, taasoo saameyn weyn ku yeelatay shirkadda...
Kiis qaboojiye uumi warshadeed oo warshad balaastig ah oo elektaroonik ah
Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in qaboojiyaha uumiga hawada ee warshadaha aan loo isticmaali karin aqoon-is-weydaarsiyada elektiroonigga ah, sababtoo ah qaboojiyaha uumiga hawada ee warshadaha ayaa kordhin doona qoyaanka fadhiga isla markaana saameyn ku yeelan doona alaabta elektiroonigga ah. Sidaa darteed, waxaa jira aqoon-is-weydaarsiyo badan oo elektiroonig ah oo aan ku dhicin isticmaalka warshadaha ...
Waa maxay qiimaha qaboojiyaha uumiga uumi warshaduhu waa macquul
Haddii aad taqaano qaboojiyaha hawada, waa inaad ogaataa farqiga weyn ee qiimaha ee noocyada kala duwan. Qaado qaboojiyaha caadiga ah ee hawada warshadaha ee 18000m3/h socodka hawada tusaale ahaan, noocyada caanka ah waxay leeyihiin qiimaha laga bilaabo 400 ilaa 600usd / unug. Waxa kale oo jira shirkado badan oo bixiya qiimaha wax ka yar 400usd / unug, Haddii aad isticmaasho ...
Tijaabada saamaynta ka dib rakibidda qaboojiyaha uumi uumi warshaduhu
Saamaynta macaamilka ka dib rakibidda qaboojiyaha hawada uumi-baxa ee warshadaha. Qiimaynta macmiilka 1: Urta gaarka ah ee qolka ku jirtaa maaha sida ay u wayn tahay, aad bay u qabowdahay; Qiimaynta macmiilka 2: Waxaan isticmaalnay heerkulbeeg inta lagu jiro aqbalaadda, heerkulkuna wuxuu ahaa 6-7 digrii lo...
Sidee loo xisaabiyaa tirada qaboojiyaha warshadaha ee looga baahan yahay warshadda caagga ah?
Dhowaan, cimiladu waa kulushahay. Macaamiil badan oo ku jira mareegaha ayaa ku baaqay la tashi waxayna sheegeen su'aashan oo kale. Waa maxay saamaynta rakibidda qaboojiyaha hawada warshadaha? Dhibaatadan oo kale, marka hore waa inaan aragnaa saameynta aad rabto inaad gaarto? Tusaale: Haddii aad rabto in aad cas...
faa'iidada biyaha la qaboojiyey ee qaboojiyaha hawada ee badbaadinta tamarta warshadaha
Mabda'a shaqada ee qaboojiyaha uumi uumi: Tignoolajiyada uumiga uumi hadda waxaa loo aqoonsan yahay habka ugu waxtarka badan ee qaboojiyaha hawada. Waxay isticmaashaa biyaha iyo hawada sida dhexdhexaadiyaha qaboojinta, waxayna isticmaashaa uumiga w...
Qaboojiye hawo la qaadi karo ayaa ku qabow siminaarka xagaaga
Qaboojiyaha hawada la qaadi karo ayaa isticmaala nidaamka wareegga biyaha ee gudaha si uu u nuugo kulaylka hawada oo hoos u dhigo heerkulka hawada, kaas oo uu ku afuufo marawaxadu si loo gaaro saameynta qaboojinta. Qaboojiyayaasha qaar ayaa sidoo kale isticmaala qaboojiyayaal sida baraf lagu daray biyaha si kor loogu qaado nuugista kulaylka.
Hawo-qaadista iyo qaboojinta waxay u baahan yihiin in lagu rakibo qaboojiyaha uumi-baxa iyo marawaxad qiiq isku mar ah
Dhawaan, macmiil ayaa i waydiiyay su'aashan oo kale ah. Aqoon-is-weydaarsigaygu waxa uu rakibaa marawaxad qiiq ah. Ma heli karaa saameyn qaboojin anigoon rakibin qaboojiyaha uumi-baxa? Sababtoo ah ma rabno inaan lacag badan ku bixino hagaajinta jawiga aqoon isweydaarsiga. Natiijadu waa taban, maxaad u leedahay t...
Dhibaatooyinka caadiga ah iyo falanqaynta qaboojiyaha uumi-baxa
Marka macaamiil badan ay isticmaalaan qaboojiyaha uumi-baxa, waxay ogaadaan in mugga hawada qaboojiyaha uumiga uu sii yaraanayo, buuquna uu sii kordhayo, dabaysha ka soo baxaysa ayaa weli leh ur aan fiicnayn. Sababta ma garanaysaa? Inta badan macaamiishu waxay waceen shirkadeena f...
Xikoo qaboojiyaha hawada nadiifinta iyo dayactirka
Markay baraarujinta deegaanka dadku kor u kacday sannadahan, qaboojiyaha jawiga deegaanka ayaa aad caan u ah xagaaga kulul. Waxay hoos u dhigi kartaa heerkulka hawada cusub ee bannaanka iyada oo loo marayo uumiga biyaha ee suufka qaboojinta. Kadibna hawo cusub oo qabow keen gudaha gudaha. XIKO ayaa bilaabay horumarinta iyo soo saarista di...
Cinwaanka: 101, MAYA. 3, KANGLE ERJIE, XIANCHONG, QIAONAN STREET, DEGMADA PANYU, MAGAALADA GUANGZHOU, SHIINAHA.
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.